Mogadishu Journal » Riyad Mahrez:Eedeymo laaluush hore hadana waxaa loo yaqaan ‘Algeria’s ninka xukuma’
Manchester City Riyad Mahrez waxaa laga yaabaa in haatan loo aasaaso mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican Afrika, laakiin tan markasta ma aysan aheyn.
Xaqiijinta tan, ha ka fogaan Vahid Halilhodzic. Maamulihii hore ee xulka qaranka Algeria, Halilhodzic ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee ogaada awooda Mahrez waxaana kamid ahaa ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Leicester, kaasoo kaliya 12 jeer kusoo bilaabay Championship-ka 2013-14, xulkiisa Koobka Adduunka ee 2014 - go’aankaasoo muran badan dhaliyay
Wareysi gaar ah oo uu siiyay Goal sanadkii 2016, Halilhodzic wuxuu yiri: “Markii ugu horreysay waxaan maqlay magaca Riyad markii tababarihii hore Christophe Delmotte uu ii sheegay inuu jiro wiil Algeria u xiiso badan oo jooga Le Havre. Wax badan kuma uusan ciyaarin halkaas laakiin wuxuu soo jiitay indhahayga. Waxaad arki laheyd inuu yahay cadaab farsamo yaqaan - wuxuu kubada u xakameeyaa si cajiib ah.
“Wuxuu u dhaqaaqay Leicester waxyar kadib wuxuuna bilaabay inuu ka ciyaaro kursiga keydka. Waxaan arkay tayo. Farsamo ahaan wuu ka sareeyay oo wuxuu ahaa dribbler casri ah, laakiin awood ma uusan laheyn. Weli, waxaan arkay kartidiisa waxaanan ku casuumay Koobka Adduunka.
“Ma sharixi karo wixii aan kala kulmay warbaahinta Algeria wixii intaas ka dambeeyay. Ma jirin caqli guud oo ku saabsan dhaleeceyntooda - qaarkood xitaa waxay sheegteen inaan lacag ka qaatay Riyad si aan ugu qaado Koobka Adduunka!
“Dabcan, ma uusan aheyn heerka uu maanta joogo, laakiin layaab iguma ahan sida uu ugu fiican yahay Premier League. Isagu waa nooca ciyaartoy ee farqiga sameeya. Ciyaaryahan casri ah, cajiib ah. Waan ogaa inaanan qalad samayn markii aan u yeedhay.
Dhammaan buuqa ay sababtay, Mahrez wuxuu mar qura ka soo muuqday final-kii Brazil. Markii Algeria ay gaartay wareega bug-baxa markii ugu horreysay taariikhdooda, Mahrez wuxuu ka daawaday kursiga keydka ka dib markii la tuuray ka dib guuldaradii furitaanka ee xulka Belgium.
Kani maahan ciyaaryahan lagu qasi jiray akadeemiyada naadi sare, lagu naaxiyay cunnooyinka Koobabka FA Cup iyo amaahda Vitesse. Mahrez waa ciyaaryahan qaatay garaacis si uu u gaaro meesha ugu sareysa.
Guulaha xirfadiisa ciyaareed waa kuwo caan ku ah inta badan - horyaalnimada aan macquul aheyn ee Leicester iyo in loo magacaabo PFA Player of the Year, oo ay ku xigto u dhaqaaqista Pep Guardiola’s Manchester City. In kasta oo Mahrez uusan dhif u aheyn inuu udub dhexaad u noqdo guulaha City sida uu u joogay Leicester, kaliya maslaxad ayaa ku doodi karta saameynta uu ku leeyahay Manchester inuu ahaa mid la dayacay; kubadsameeyaha ayaa diiwaan galiyay 26 gool iyo 21 caawin tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda 2018.
Si kastaba ha noqotee, Mahrez wuxuu noqday shakhsiyaadka aan muran ku jirin ee xulkiisa. Halilhodzic wuxuu ku sifeeyay inuu yahay "wiil caan ah oo reer Algeria ah: cabsi la'aan, jecel dareenka, mar walbana wuxuu gacan ka geystaa jawi wanaagsan kooxda dhexdeeda. Had iyo jeer wuu kaftamayaa laakiin si fiican ayuu naftiisa ugu maareeyaa xaalad kasta. ”
29 jirkaan ayaa hoosta ka xariiqay xaaladdiisa inuu yahay taliyihii Algeria intii lagu jiray fasaxii ugu dambeeyay ee caalamiga ah, markii ugu horeysay isagoo dhaliyay dadaalkan soo jiidashada leh ee isku darsaday geesinimada iyo heerka fasalka ee Zimbabwe.